The Christmas Ride (2020) | MM Movie Store
၂၀၂၀ ခုနဈထှကျ ခရဈစမတျဇာတျကားလေးပါ။သမာရိုးကြ ခရဈစမတျကားမြိုးတော့မဟုတျပါဘူး . ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ အပိုဝငျငှရေအောငျ တက်ကစီဆှဲတဲ့ဂြျောဂြီယာဆိုတဲ့ကောငျမလေးကနအေစပွုပါတယျ…
သူက ခရဈစမတျနမှေ့ာတောငျ လူတှကေို ကူညီမယျဆိုတဲ့စိတျထားလေးနဲ့ အိမျမှာမနားပဲ တက်ကစီထှကျဆှဲခဲ့တာပေါ့…အဲဒီမှာ သူသိလိုကျရတာက လူတိုငျးဟာ ခရဈစမတျနမှေ့ာပြျောနကွေတာမဟုတျဘူးဆိုတာပါပဲ… ဂြျောဂြီယာတဈယောကျ သူ့ခရီးသညျတှနေဲ့ ပွောဆိုဆကျဆံပုံတှကေို ကွညျ့ရှုရမှာဖွဈပါတယျ…
ထူးခွားတာတဈခုက ဒီဇာတျကားအတှကျ ဒိုငျယာလော့ချအတိအကမြရှိခဲ့ပါဘူးတဲ့ ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့တဲ့သူတိုငျးကိုသူတို့ဘဝရဲ့အတှအေ့ကွုံအစဈတှကေို ပွပွေဈအောငျ ပွောပွစခေဲ့တာပါတဲ့ လူတှရေဲ့ကှဲပွားခွားနားတဲ့ဘဝတှကေိုလှဈဟပွထားတာပဲဖွဈပါတယျ။
၂၀၂၀ ခုနစ်ထွက် ခရစ်စမတ်ဇာတ်ကားလေးပါ။သမာရိုးကျ ခရစ်စမတ်ကားမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး . ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ အပိုဝင်ငွေရအောင် တက္ကစီဆွဲတဲ့ဂျော်ဂျီယာဆိုတဲ့ကောင်မလေးကနေအစပြုပါတယ်…
သူက ခရစ်စမတ်နေ့မှာတောင် လူတွေကို ကူညီမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့ အိမ်မှာမနားပဲ တက္ကစီထွက်ဆွဲခဲ့တာပေါ့…အဲဒီမှာ သူသိလိုက်ရတာက လူတိုင်းဟာ ခရစ်စမတ်နေ့မှာပျော်နေကြတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ… ဂျော်ဂျီယာတစ်ယောက် သူ့ခရီးသည်တွေနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံပုံတွေကို ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်…
ထူးခြားတာတစ်ခုက ဒီဇာတ်ကားအတွက် ဒိုင်ယာလော့ခ်အတိအကျမရှိခဲ့ပါဘူးတဲ့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့သူတိုင်းကိုသူတို့ဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံအစစ်တွေကို ပြေပြစ်အောင် ပြောပြစေခဲ့တာပါတဲ့ လူတွေရဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့ဘဝတွေကိုလှစ်ဟပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။